Izindaba - Unyaka wokufinyeleleka ngo-2018: Amandla amaningi aphelele aphelele aphathelene nokuphathwa kwamandla ngaphansi kwe-inthanethi yamandla
Ukufika konyaka we-2018: Amandla amaningi aphelele ahlanganisiwe wokuphathwa kwamandla ngaphansi kwe-inthanethi yamandla
I-Polaris Energy Storage Network News: Kungashiwo ukuthi unyaka ka-2016 no-2017 kuyiminyaka “yomqondo” we-inthanethi yamandla. Ngaleso sikhathi, wonke umuntu ubesaxoxa ngokuthi "iyini i-internet energy", "kungani kufanele i-inthanethi yamandla", futhi "ingakhula kanjani i-inthanethi yamandla?" Bheka ”. Kodwa-ke, u-2018 ungene 'onyakeni wokufika' we-inthanethi yamandla, futhi wonke umuntu uxoxa ngokujulile ukuthi angayenza kanjani. I-National Energy Administration kanye noMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe inamaphrojekthi amaningi wokusekela kanye namanani amakhulu wokutshala imali eningi, njenge-batch yokuqala yamaphrojekthi wokukhombisa we- “Internet +” smart energy (energy Internet) amenyezelwe yiNational Energy Administration ngonyaka we-2018.
I-Polaris Energy Storage Network News: Kungashiwo ukuthi unyaka ka-2016 no-2017 kuyiminyaka “yomqondo” we-inthanethi yamandla. Ngaleso sikhathi, wonke umuntu ubesaxoxa ngokuthi "iyini i-internet energy", "kungani kufanele i-inthanethi yamandla", futhi "ingakhula kanjani i-inthanethi yamandla?" Bheka ”. Kodwa-ke, u-2018 ungene 'onyakeni wokufika' we-inthanethi yamandla, futhi wonke umuntu uxoxa ngokujulile ukuthi angayenza kanjani. AbeNational Energy Administration kanye noMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe banamaphrojekthi amaningi wokuxhasa namanani amakhulu wokutshala imali eningi. Isibonelo, i-batch yokuqala yamaphrojekthi wokukhombisa we- “Internet +” smart energy (energy Internet) amenyezelwe yiNational Energy Administration ngonyaka we-2018.
Kungekudala, ingqungquthela ye-Intanethi ye-Global Energy Internet yabanjwa eBeijing. Abaholi bezimboni ezingaphezu kuka-800 abavela emazweni angaphezu kwezi-30 nezifunda emhlabeni wonke bahlangana ukuzogxila engqungqutheleni ye- “Global Energy Internet-From China Initiative to World Action”. Shintshana ngemibono, wabelane ngemiphumela, bese uxoxa ngezinhlelo zokuthuthukisa i-inthanethi zamandla emhlabeni.
Kungashiwo ukuthi wonke umuntu ubheke kakhulu ekufezekisweni kokuhlangana kwamandla, futhi i-inthanethi yamandla kulindeleke ukuthi ilethe izinguquko ezintsha empilweni yomuntu. Engqungqutheleni ethi “Made in China 2025 Summit” ngasekupheleni konyaka we-2017, uMnu. Zhang Bin, iphini likamongameli weHanergy Group, naye uzwakalise ukuqonda kwakhe nge-inthanethi yamandla esizayo ku “Round Table Dialogue-Production Revival: Inkhulumiswano phakathi kweChina neChina. Umhlaba".
Ukuthuthukiswa kwe-intanethi yamandla kuphakamise imibuzo eminingi emisha, imibono emisha nobuchwepheshe obukhiye. Ngokujula kocwaningo, i-inthanethi yamandla wesifunda ihlongozwe yiwo wonke umuntu. Ungayichaza kanjani i-inthanethi yesifunda yamandla: Uma i-inthanethi yamandla ibhekwa njengeyakhelwe kumqondo we-Inthanethi ulwazi lwe-fusion "I-Wide Area Network" ingahambelana namandla wesifunda "njengenethiwekhi yendawo yendawo", ebizwa ngokuthi "inethiwekhi yamandla wesifunda", eshintshanisa imininingwane nokuxazululwa kwamandla nge "Wide Area Network" ngaphandle, kuhlinzeka ngokulawulwa kwamandla nensizakalo.
Inethiwekhi Yezamandla Yesifunda
Igridi yamandla wesifunda iyisisekelo sokuhlaziywa kohlelo lwamandla amaningi nokubonakaliswa kokhonkolo kwezimpawu zezinhlelo zamandla amaningi. Ngokombono osebenzayo, uhlelo lamandla amaningi lingakwazi ukuhlanganisa izindlela ezahlukahlukene zamandla, futhi lilinganise ukusatshalaliswa ngokuya ngezinto ezifana nentengo nomthelela wezemvelo; ngokombono wezinsizakusebenza zamandla, izidingo zomsebenzisi eziningi zithathwa njengezibalo futhi zithunyelwa ngokomthetho Ukufeza inhloso yokucheba okuphezulu nokugcwaliswa kwesigodi, kanye nokusebenzisa amandla okunengqondo; ngokombono wamanethiwekhi wamandla, ngokuhlaziywa kokubambisana kwamanethiwekhi kagesi, amanethiwekhi kagesi wemvelo, amanethiwekhi okushisa, namanye amanethiwekhi, akhuthaza ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bamandla amaningi. Le ndawo ingaba nkulu njengedolobha, idolobha, umphakathi, njengepaki yezimboni, amabhizinisi amakhulu, isakhiwo, esivame ukumboza izinhlelo zamandla ezihlanganisiwe njengokuhlinzekwa kwamandla kagesi, ukuhanjiswa kwegesi, ukufudumeza, ukuhanjiswa kwe-hydrogen, kanye nokuhamba ngogesi. kanye nezisekelo zokuxhumana ezihlobene. Isici esiyisisekelo sesikhungo ukuthi kufanele sibe nezixhumanisi zokuphehla amandla, ukuhambisa, ukuguqula, ukugcina nokusebenzisa. Kule nethiwekhi yesifunda yokuhlanganiswa kwamandla kagesi, abathwali bemininingwane bafaka "ukuhamba kukagesi", "ukuhamba kwegesi yemvelo" kanye "nemininingwane". I-flow "," ukuhamba kwezinto ", njll. Ngenxa yobukhulu bawo obuncane, inethiwekhi yamandla wesifunda ingaholwa futhi yakhiwe futhi isetshenziswe nguhulumeni, izinkampani zamandla namabhizinisi amakhulu ezimboni, futhi inenani elisebenzayo elinamandla. Inethiwekhi yamandla wesifunda iyingxenye ye-inthanethi yamandla, okubandakanya izixhumanisi zamandla amaningi futhi inezindlela nezimpawu ezihlukile. Kufaka phakathi izixhumanisi zamandla ezilula ukulawula nezihambisanayo futhi okunzima ukulawula izixhumanisi zamandla; futhi iqukethe amandla ekunzima ukuyigcina ngamandla amakhulu, Ibuye ibe namandla okulula ukuwagcina nokuwahambisa; kukhona konke okuhlinzekwayo okuhlanganisiwe ekugcineni kokuphehla kwamandla kanye nokwenza okuhle kuhlanganisiwe ekugcineni kokusetshenziswa kwamandla.
Izici eziyinhloko ze-inthanethi yesifunda zamandla
Uma kuqhathaniswa ne-inthanethi yesifunda yamandla amakhulu, i-inthanethi yamandla esifunda isebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi wezimboni kanye nabahlali endaweni yendawo njengeqembu labasebenzisi. Ngokuqoqa ukukhiqizwa kwamandla, ukusetshenziswa, ukudluliselwa, ukugcinwa kanye neminye imininingwane yolwazi, ngokuhlaziywa kwedatha, ukuhlangana kwamandla nokwenza kahle Uhlelo lokuhlela luhlangabezana nezidingo zemithwalo yabasebenzisi esizindeni. Ngokuhambisana nalokhu, i-inthanethi yesifunda yamandla wesifunda isebenza njengesixhumanisi phakathi kwe-inthanethi yezifunda ezahlukahlukene. Ngokudlulisa kwamandla amakhulu, ukuhanjiswa kwegesi namanye amanethiwekhi wesistimu yomgogodla, ukuhanjiswa kwamandla okude ngebanga phakathi kwezifunda kungatholwa, kuqinisekiswe ukuphepha nokuqina kwe-intanethi ye-energy esifundeni ngasinye ngaphakathi kwendawo efinyelela kuyo. Sebenza ukuhlinzeka ngezinsizakusebenza zangaphandle zamandla lapho kukhukhula i-inthanethi yesifunda kanye nezikhala. Ukuze uvumelane nokuhlinzekwa kwamandla kanye nephethini yokufuna ezifundeni zasekhaya, ngesisekelo sokuthola ngokugcwele isipiliyoni esihle senqubo yokuthuthukiswa kwe-Intanethi, i-inthanethi yamandla esifunda yenze ezinye izici ezihlukile kune-inthanethi yesifunda yamandla.
Eyodwa isebenza ngokuhambisana
Ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esindayo somthwalo womsebenzisi esifundeni, inani elikhulu lezinto ezisatshalaliswa zamandla zifakwa ngaphakathi komkhawulo we-Intanethi wamandla wesifunda, ukumboza i-CCHP okusakazwayo, ukushisa okuhlanganisiwe namandla CHP, ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-Photovoltaic iziteshi zokukhiqiza, inhlabathi Izinhlobo ezinhlobonhlobo njengamaphampu okushisa omthombo zakha uhlelo lokuhlinzekwa okuyinhlanganisela lwamafomu ahlukahlukene wamandla njengokuqoqwa kukagesi, ukushisa, ukupholisa, negesi, okungakuqonda kahle ukusetshenziswa kwamandla kwamandla. Ngasikhathi sinye, i-inthanethi yesifunda yamandla ihlinzeka ngezihlanganisi ezijwayelekile zama-plug-and-play ezinhlobonhlobo zokufinyelela kwamandla okusatshalaliswa, kepha lokhu futhi kubeka izidingo eziphakeme kakhulu zokwenza kahle kanye nokulawulwa kwe-inthanethi yamandla. Ngalesi sizathu, ukuhlelwa kokuxhumanisa ugesi, ubuchwepheshe be-P2G, ubuchwepheshe be-V2G, kanye nobuchwepheshe beseli yamafutha, okuthuthukisa ukuhlanganiswa kwamandla amaningi, kuzodlala indima ebaluleke kakhulu ngokuzayo.
Okwesibili ukusebenzisana kwezindlela ezimbili
I-inthanethi yamandla wesifunda izophula imodeli ekhona ye-energy-net-dutch flow system bese yakha imodeli yokugeleza kwamahhala, etholakalayo nekulawuleka yokuphela kwamandla amaningi. Ama-routers asatshalaliswa kwamandla azovumela ukuxhumeka kwamandla kunoma iyiphi indawo endaweni. Ukufakwa kweziteshi zokuphehla amandla noma i-energy hubs kuzophula izithiyo zomkhakha phakathi kwezinkampani zokuqala zokushisa, izinkampani zamandla nezinkampani zegesi, futhi izakhamizi ezihlome ngemishini yokuhambisa amandla kulindeleke ukuthi zibambe iqhaza ekunikezelweni kwamandla kwe-Intanethi ye-Intanethi kanye namanye amandla abahlinzeki. Ngokuzayo, ngentuthuko esheshayo embonini yezimoto zikagesi, inethiwekhi yokuhamba ngezimoto ezihamba ngogesi smart njengoba umzimba oyinhloko nayo izohlanganiswa kumodeli we-Intanethi wamandla okhona.
Isithathu ukuzimela okugcwele
Ihlukile kunendlela yendabuko yokusetshenziswa kwamandla, i-inthanethi yesifunda yamandla isebenzisa ngokuphelele amandla ahlukahlukene esifundeni, yakha uhlelo lokuzenzela olwanele esifundeni, imumatha ngokugcwele amandla asatshalaliswa esifundeni, futhi ibone ukusetshenziswa kahle kwezindlela ezahlukahlukene izikhungo zamandla. Ngasikhathi sinye, njengengxenye eyisisekelo ye-inthanethi yomgogodla wamandla, i-inthanethi yamandla wesifunda nenethiwekhi yomgogodla yamandla igcina indlela yokugeleza yamandla yezindlela ezimbili, ngosizo lwenethiwekhi enkulu yamandla asemuva kanye nenye i-Intanethi yamandla esifunda izindlela ezimbili zokushintshana kwamandla nolwazi.
Ngokusekelwe kuzimpawu ezingenhla, isici esiyinhloko se-Intanethi yamandla esifunda ukusebenzisa "i-inthanethi +" ukucabanga ukusetha kabusha izidingo zenethiwekhi yamandla, ukufezekisa izinga eliphezulu lokuhlanganiswa kwamandla nolwazi, kanye nokukhuthaza ukwakhiwa kolwazi lwenethiwekhi yamandla ingqalasizinda. Ngokwazisa ubuchwepheshe obunjengamapulatifomu okuhweba oku-inthanethi nokusebenza kwedatha enkulu, i-Energy Internet izokwengeza inani elikhulu lemininingwane njengokukhiqizwa kwamandla, ukuhambisa, ukusetshenziswa, ukuguqulwa, isitoreji, kanye nokuqondisa ukukhiqizwa kwamandla nokuhlela ngobuchwepheshe bezimayini zolwazi olunjalo. njengokubikezela kwamandla kagesi kanye nokuphendula okufunwayo.
Ungayibona kanjani inzuzo esemthethweni ye-inthanethi yesifunda yamandla, uSolwazi uSu Hongbin weSitsinghua University uhlongoze ngokuhlelekile: ukuphathwa kwamandla okupheleliswa kwamandla okuningana kwe-inthanethi yamandla esifunda. Ngesikhathi umhleli evakashela uSolwazi uSun eNyuvesi yaseTsinghua ngonyaka ka-2015, washo lolu cwaningo. Engqungqutheleni yeNational Energy Internet ngoDisemba 2017, uSolwazi uSun wabelana ngokusemthethweni futhi waxoxa ngemiphumela yocwaningo.
Inkinga yokulawula ephezulu ekuphishekeleni ukwengeza izinzuzo
Ungayandisa kanjani inzuzo ngaphansi kwesisekelo sokuhlinzekwa kwamandla okuphephile ngokusebenzisa “amandla amaningi okuphelelisa kanye nokuxhumanisa kwenethiwekhi yomthombo” wudaba lokugxila ochwepheshe abakhathazeka kakhulu ngalo ekusebenzeni kwephrojekthi yokubonisa amandla we-inthanethi. Lokhu akulula ukufeza. Ngombono wezobuchwepheshe, le nkinga yokugxila ingabangelwa ukulawulwa okuphelele kwenethiwekhi eyinkimbinkimbi yokugeleza kwamandla amaningi. Le nkinga yokulawula efanelekile ukuphishekela ukwandisa inzuzo, inzuzo = izindleko ezingenayo, futhi indawo ethintekayo ingukuphakelwa kwamandla okuphephile. Imali engenayo lapha ifaka phakathi ukuthengiswa kwamandla nezinsizakalo, futhi izindleko zibandakanya ukuthenga amandla nezinsizakalo. Izindlela ezenziwe kahle zisatshalaliswa kumakhaza, hot, igesi, ugesi, amanzi, ezokuhamba, umthombo, inethiwekhi, ukushaja, isitoreji nezinye izixhumanisi. Izithiyo zifaka ibhalansi phakathi kokuphakelwa nokufunwa, ububanzi bokusebenza, kanye nokuphepha kokuphakelwa kwamandla. Le nkinga yokugxila ekugcineni yaqalwa ngohlelo, olubizwa ngokuthi yi-Integrated Energy Management System (IEMS).
Ama-IEMS angabhekwa njengohlelo lwesine lokulawulwa kwamandla wesizukulwane sesine (Energy Management System, EMS). I-EMS uhlelo lokuthatha izinqumo kwikhompyutha lokuhlaziywa kwe-inthanethi, nokwenza kahle nokulawula okusetshenziswa esikhungweni sokulawulwa kokuhambisa i-grid kwamandla. Yisikhungo sezinzwa nesokuhambisa imiyalo yokusebenza kwegridi yamandla, futhi umnyombo wokuhlakanipha kwegridi yamandla amakhulu. Iqembu lokucwaninga likaProfesa Sun selifunde iminyaka engaphezu kwengu-30. Okokuqala, ake sibukeze umlando we-EMS.
Isizukulwane sokuqala se-EMS savela ngaphambi kuka-1969 futhi sabizwa nge-EMS yokuqala. Le EMS ifaka kuphela i-SCADA yokuhlinzekwa kwamandla, kepha iqoqa imininingwane kuphela. Akukho ukuhlaziywa kwenethiwekhi yesikhathi sangempela, ukusebenza kahle, nokulawulwa kokubambisana. Ukuhlaziywa kwenethiwekhi nokwenza kahle kuncike ekubalweni okungaxhunyiwe ku-inthanethi, futhi kungokwesheduli enika amandla. Abaphathi bamapaki bamanje akufanele bame ezingeni lokuhlelelwa okunamandla, kepha badinga ukuphathwa kobuhlakani ukuthuthukisa ukuncintisana okuyisisekelo.
Isizukulwane sesibili se-EMS savela ekuqaleni kweminyaka yama-1970s ekuqaleni kwekhulu lama-21 futhi sabizwa nge-EMS yendabuko. Umsunguli walesi sizukulwane se-EMS nguDkt Dy-Liacco, ophakamise imodeli eyisisekelo yokulawulwa kohlelo lokuphehla ugesi, athuthukise ukuhlaziya kwenethiwekhi yesikhathi sangempela, ukusebenza kahle, nokulawulwa kokubambisana, ngakho-ke ngeminyaka yo-1970, i-EMS yathuthuka ngokushesha okukhulu. izwe lami laqedela ukwethulwa kwezinhlelo ezinkulu ezine zokuhambisa igesi ezisebenza ngo-1988, yabe isiqeda ukugaya, ukufaka, kanye nokuphinda ithuthukise ukuthuthukisa i-EMS ngamalungelo ezimpahla ezizimele zobunikazi. Ngaleso sikhathi, i-Tsinghua University yathatha ukwethulwa, ukugaywa nokufakwa kwe-EMS ye-Northeast Power Grid. Ngoba iNortheast yayiyisizinda sezimboni esindayo ngaleso sikhathi, ukulungiswa kwenethiwekhi kweNortheast Power Grid kwakukukhulu, futhi umthwalo omkhulu ezweni ubusenyakatho mpumalanga. Njengamanje, i-EMS yasekhaya iye yasendaweni. Ukuhlelelwa kule nkathi sekungokwesheduli yokuhlaziywa futhi kukhuphukele ezingeni elisha.
Isizukulwane sesithathu i-EMS yi-grid EMS ehlakaniphile ehlelwe ngumthombo nenethiwekhi. Kuvele ngemuva kokuqalwa kwamandla amakhulu avuselelekayo. Ngalesi sikhathi, akubanga nokubambisana okuvundlile okunamandla amaningi, kepha ukubambisana kwenethiwekhi yomthombo kuphela. Ngokubheka izici ezingalawuleki nezishintshashintshayo zamandla amakhulu avuselelekayo, izinsiza kusebenza eziningi eziguqukayo ziyadingeka, ukusuka emthonjeni kuya ekuhambisweni ukusatshalaliswa. Ngalesi sikhathi, i-EMS ingakwazi ukuhlanganisa futhi isebenzise izinsiza ezahlukahlukene ezisatshalalisiwe ukuthuthukisa ukuxhumana okuhanjiswa ngaphakathi kwezakhiwo Ukwakha, kusuka kumthombo, kunethiwekhi eNetherlands, kune-EMS ehambisanayo. Kukhona i-EMS yamapulazi omoya kanye nezitshalo zamandla we-Photovoltaic, i-EMS yezimoto zikagesi, izakhiwo namakhaya, ne-EMS yokuhambisa amandla, ukusatshalaliswa, ne-grid encane. Lawa ma-EMS aqala ukuzikhuza, bese exhunywa ndawonye ngamanethiwekhi okuxhumana ukuze akhe ukusebenzisana. Ngaleso sikhathi, kungabizwa ngokuthi umndeni wakwa-EMS. Kunamalungu amaningi emndenini we-EMS, futhi amalungu ehlukene anezici ezihlukile zokubona ngokubambisana umthombo nokuhlangana kwenethiwekhi kwegridi ehlakaniphile.
I-EMS yesizukulwane sesine noma isizukulwane esilandelayo ibizwa ngokuthi uhlelo lokuphathwa kwamandla oluhlanganisiwe oluningi, okungukuthi, i-IEMS. Ukuhlanganiswa lapha ukuhlanganisa nokuhlanganisa imithombo yamandla ehlukahlukene. Ngenxa yokuqhekeka kwemithombo yamandla ahlukahlukene kanye nokusebenza okuphansi okuphelele kwamandla, ukusetshenziswa okuningiliziwe nokufana nokwe-Cascade kuyadingeka; ngasikhathi sinye, ngenxa yokuntuleka okukhulu kwezinsizakusebenza zokuguquguquka, inani elikhulu lomoya, amanzi nokukhanya, kuyadingeka ukunwebeka ekuxhumeni kwamandla ahlukahlukene futhi kutholakale emithonjeni ehlukahlukene yamandla Imithombo emisha eguquguqukayo yokusekela ukusetshenziswa wamandla amakhulu avuselelekayo; ngokusebenzisa ngokugcwele kanye nokuhlelela inzuzo ephezulu, esakhiweni sokuqinisekisa ukuphepha kokuhlinzeka kwamandla nekhwalithi ephezulu, ukunciphisa izindleko zokusebenzisa amandla kanye nokwenza ngcono ukusebenza kwezomnotho kwezinsizakalo zamandla eziphelele.
Kufana nobuchopho, ngaphansi kohlelo oluphelele lwamandla, olubandayo, ukushisa, igesi, ugesi, amanzi, ezokuhamba, zonke izinhlobo zokugeleza kwamandla, okubizwa ngokuthi ukugeleza kwamandla amaningi. Engqungqutheleni ye-International Applied Energy (ICAE) ebanjelwe e-UK, uhlelo lolu lwamukelwa njengolungakaze lube khona emhlabeni. Umphumela wakamuva owakhishwa ngonyaka we-2017 e-Tsinghua University, "Multiple Energy Complementary Energy Comprehensive Energy Management System in Park" ungowokuqala umkhiqizo emhlabeni we-IEMS. Kunzima kakhulu eqenjini lokucwaninga ukwandisa i-grid EMS iminyaka engama-30 ibe yi-IEMS. Ngemuva kweminyaka emi-5 yocwaningo nentuthuko, futhi futhi ngokusekelwe eminyakeni engama-30 yocwaningo lwe-EMS yegridi kanye nesipiliyoni sokuthuthuka, i-IEMS yathuthukiswa ngempumelelo.
Imisebenzi eyinhloko ye-IEMS
Amandla okugeleza kwamandla amaningi Isetshenziselwa ukuqaphela ukuqina kwedatha yesikhathi sangempela kanye nokusebenza okuqinile kwesimo sangempela nesikhathi sokuqapha. Kuyisisekelo secwayiso esilandela sokuqala, ukusebenza kahle, kanye nemisebenzi yokulawula, futhi sisebenzisa isoftware yesistimu ukusekela izinsizakalo ezinikezwe ipulatifomu. Amandla okugeleza kwe-Multi-energy SCADA "uhlelo lwenzwa" lwe-IEMS. Ngokusekelwe kwi-Intanethi ye-Energy, iqoqa idatha yokugeleza kwamandla ahlukahlukene (imvamisa yamasampula: ugesi usezingeni lesibili, futhi ukushisa / ukupholisa / umoya usesimweni sesibili noma somzuzu) ukuqedela umsebenzi wokuhlola ohambelana nawo. Futhi unikeze imininingwane ekulinganiselweni kwesimo nakwimodyuli yokusebenza yesicelo esithuthukile, thola imiyalo yokulawula ukusebenza kwesistimu, bese uyithumela kumishini yokusebenza ukuze kwenziwe ngokusebenzisa izibonakaliso zokulawula okukude / amasiginali akude. Isixhumi esijwayelekile sokugeleza komsebenzi se-SCADA sifaka phakathi ukusatshalaliswa kokuhamba kwamandla, ukusakazwa kwesiteshi sensimu, imisebenzi yohlelo, ukuqapha okuphelele, imininingwane yokusebenza, ukuhlaziya nokuhlola, ne-alamu ehlakaniphile.
Amandla wokugeleza kwamandla amaningi Ngenxa yokusatshalaliswa okubanzi kwamaphuzu wokulinganisa kunethiwekhi yezinzwa ezihamba ngamandla amaningi, izinhlobo ezahlukahlukene zokulinganisa, ikhwalithi yedatha ephansi, ubunzima bokulondolozwa, kanye nokuzwela okuphezulu kwezindleko, akunakulindeka ukuthi ukuqoqwa kwedatha okungaphelele namaphutha kuzokwenzeka . Ngakho-ke, inethiwekhi yokugeleza kwamandla amaningi idinga ubuchwepheshe bokulinganisa isimo ukunikeza isimo senethiwekhi sangempela, esithembekile, esingaguquki nesiphelele, esihlinzeka ngesisekelo sokuhlola nokwenza izinqumo ze-IEMS. Ukulinganiselwa kwesimo sokuhamba kwamandla amaningi kungaqedela idatha yokulinganisa futhi kususe idatha emibi, ukuze kucatshangelwe idatha emibi, ingabonakali, futhi iyabonakala, futhi ekugcineni inciphise inani lokufakwa kwenzwa, inciphise ubunzima benethiwekhi yokuxhumana, futhi inciphise utshalomali kanye nezindleko zenethiwekhi yezinzwa. Umphumela wezindleko zokulungiswa uthuthukisa ukuthembeka kokuhlola nokwenza izinqumo ngokwenza ngcono ukuthembeka kwedatha eyisisekelo, futhi kunciphise ubungozi bezingozi zokusebenza kwinethiwekhi.
Ukuhlola nokulawula ukugeleza kokuhamba kwamandla amaningi Ukubaluleka kokuphepha kuyabonakala, futhi ukuphepha kohlelo lwamandla kuhlobene ikakhulukazi nokuphepha kwempilo nempahla. Ngakolunye uhlangothi, kuyadingeka ukusungula umqondo we-"N-1 ″ nenqubomgomo yezokuphepha. Lo mqondo ukunaka isixhumanisi esibuthakathaka kakhulu futhi wenze uhlelo. Isibonelo sanikezwa esithangamini nabezindaba ngempumelelo yethu namhlanje ekuseni. Kwathiwa ukuthi ukuphuma kwamandla okukhulu okukhulu muva nje eTaiwan kwabangelwa ukwehluleka kwe -veni yegesi. Ngemuva kwalokho i-valve iyisixhumanisi esibuthakathaka ohlelweni lokuphehla ugesi. Ngakho-ke, kufanele sinake kakhulu izixhumanisi ezibuthakathaka, futhi kumele kube nohlelo lwezinkinga, ngaphandle kwalokho sizobhekana nengozi enkulu. Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukunaka ukulawulwa kokuphepha kwesango lokupaka lepaki. Ukwabiwa kwamandla kanye nokusebenza kwezindleko zesango lepaki kuyinkinga esemqoka. Ngakolunye uhlangothi, lapho kukhula khona umthamo, kukhuphuka izindleko zokutshalwa kwemali koguqeshi, ngakolunye uhlangothi, kukhula inani elikhulu, inani lemali ekhokhiswa yinkampani yegridi ephezulu. Isibonelo, izindleko zizonke zokutshala imali kanye nokusebenza kwamandla we-50 MW namandla ayi-100 MW wehluke kakhulu. Uma yakhelwe njengomthamo wama-50 MW, umguqululi uzoshiswa uma kungenzeka inani langempela lidlulisiwe. Ungalawula kanjani ukuhamba kwesango ngaphakathi kwama-megawatts angama-50 inkinga yokulawulwa kokuphepha. Ohlelweni lokuhamba kwamandla amaningi, amasistimu e-energy ahlukene ahlanganiswe futhi athonywe wodwa. Ingxenye ethile yamaphutha nokuphazamiseka kuzothinta ezinye izingxenye zohlelo lokuhamba kwamandla amaningi, okungadala ukusabela kwe-chain, ngakho-ke ukucubungula kokuhlanganisa kuyadingeka. Ungasebenzisa ukuguquguquka okunikezwe yi-inertia yokushisa, igesi nezinye izinhlelo ukunikeza izindlela ezintsha zokulawula ukuphepha kwezinhlelo zikagesi. Ungasebenzisa lezi zindlela ezintsha zokulawula ukuphepha ngokuhlanganyela.
Ukuhlela kokugeleza kwamandla amaningi. Kunemiqondo eminingi ebalulekile lapha: ukuhlela ukuqala kokuma, ukuhlela kosuku nosuku, ukuhlela kosuku nosuku, nokulawulwa kwesikhathi sangempela. Ipaki noma ukunikezwa okuphindwe kathathu kwedolobha, iyunithi kagesi, kanye no-boiler kagesi kungaqalwa kumiswe. Eminye imishini ingamiswa ukwehlisa izindleko. Lokhu kungaqalwa futhi kumiswe ngokuya ngokuqala okulungile kanye nohlelo lokumisa olunqunyelwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Ngemuva kwalokho lungisa ukuthi kukhishwe kangakanani kusisekelo sokuqala bese uyamisa, lokhu ukuhlelelwa kosuku nosuku. Ukuhanjiswa kosuku lwe-Intra kungenxa yezinguquko zokukhishwa kwamandla komoya kanye nezinguquko zemithwalo, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uhleleke kabusha ngaphakathi kosuku ukuvumelana nokukhishwa okusha kokuphehla kwamandla kagesi futhi ugcine ibhalansi efanelekile phakathi kokuphuma nomthwalo. Ekugcineni, lapho kufinyelela isigaba sesibili, kuyadingeka ukulawula. Ngokuphepha kwenethiwekhi, umthethonqubo wevolumu, kanye nokushintshwa kwemvamisa, ukulawulwa kwesikhathi sangempela kuyadingeka. Izinga lesikhathi sokuhlela lide, ngokuvamile kumayunithi wemizuzu eyi-15, futhi ukulawulwa kungamasekhondi, futhi isilinganiso sesikhathi sifushane. Ohlelweni lokuhamba kwamandla amaningi, kunezindlela ezingashintshana ngaphezu kohlelo lwamandla olulodwa. Ngokombono wokulondolozwa komthombo wegridi yomthombo, ukuhlelwa okuphelele nokulawula kokupholisa, ukufudumeza, igesi, nogesi kungatholakala.
Intengo yamandla yezindawo eziningi zokuhamba kwamandla. Ipaki noma idolobha elihlakaniphile kufanele licabangele ukwakha imodeli enhle kakhulu yangaphakathi yebhizinisi. Imodeli yangaphakathi yebhizinisi ayisiyangaphandle, hhayi ngaphezulu, kodwa yabasebenzisi abasepaki. Ngabe imodeli yebhizinisi elinje kufanele ibukeke kanjani? Imodeli yesayensi kunazo zonke imodeli yenani le-node. Imodeli yamanani we-node energy kuqala kudingeka ukubalwa ukuthola inani lokusetshenziswa kwamandla ezindaweni ezahlukene. Izindleko zokusebenzisa amandla zifaka izingxenye ezine: eyodwa izindleko zokukhutshwa kwamandla; owesibili izindleko zokulahleka kokudluliselwa; okwesithathu kuyizindleko zokuxineka kwenethiwekhi; ezine Kuyizindleko zokuhlanganisa amandla amaningi. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukubala ngokwesayensi nangokunembile inani lentengo lamandla we-node ngayinye, kufaka phakathi intengo yamakhaza, ukushisa, igesi nogesi, nentengo yezikhathi ezahlukahlukene nezindawo ezahlukahlukene. Ngokubalwa okunembayo kuphela lapho izindleko zamandla epaki zingancishiswa kakhulu, ngoba Ungasebenzisa amasiginali entengo ukuqondisa abasebenzisi ukusebenzisa amandla. Ngale ndlela, izindleko zamandla epaki yonke zingancishiswa kakhulu ngamanani wamandla aguqukayo.
Intengo yamandla we-node isethwe ngokuya ngezindleko ezingemuva zomkhiqizi zomhlinzeki. Lapho ulayini uvinjiwe, intengo yendawo ngayinye iveza amanani ahlukile ngokuya ngendawo. Intengo yesikhathi sangempela ingakhuthaza ukuguquguquka kohlangothi lomsebenzisi. Intengo yamandla we-node ikhombisa izindleko ngokwesayensi, okulungele ukusungulwa kwendlela yemakethe yangaphakathi efanele.
Amandla wamandla amaningi ageleza amandla amaningi. Isitjalo samandla esibonakalayo siyimodeli yebhizinisi yemakethe ephezulu. Yonke ipaki noma idolobha lingashintshwa laba isitshalo esikhulu samandla amakhulu. Yize kungesona isizinda samandla ngokomzimba, kunemithombo yamandla eminingi esatshalaliswa njengokugcinwa kwamandla nokushisa okuhlanganisiwe, ukupholisa namandla. Iba umdlali omkhulu wemakethe oguqukayo. Ngenxa yomthamo omncane nenani elikhulu lemithombo esatshalaliswa, kunzima ukuphatha imakethe ngawodwana. Ngokuqoqwa kwezitshalo ezinamandla kagesi, izinsizakusebenza ezisatshalaliswa eziningi zingahle zihlanganiswe futhi ziklanywe ngokwakhiwa kwesoftware ukunikeza ukushefa okuphezulu, imvamisa yokushintshwa kwamandla, ukulawulwa kwamandla kagesi nezinye izinsizakalo zezimakethe zangaphandle. Lwela ukwabiwa okuhle kanye nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza jikelele. Imodeli enjalo yebhizinisi ingaletha izinzuzo eziphezulu zezomnotho, eseyenzeka e-United States.
Ngokusetshenziselwa ukuthunyelwa okulungiselelwe kahle, isizinda samandla okusebenza singakwazi ukufaka amandla kagesi asatshalaliswa, umthwalo olawulekekayo kanye namadivayisi wokugcina amandla epakini abe isethi ebonakalayo enokulawuleka, ukuze ipaki ibambe iqhaza ekusebenzeni nasekuhanjisweni kwegridi yamandla esezingeni eliphakeme njenge ngokuphelele. Isizinda samandla esisebenzayo siqondisa ukungqubuzana phakathi kwegridi yamandla esezingeni eliphakeme nemithombo esatshalaliswa, isebenzisa ngokugcwele inani nezinzuzo izisetshenziswa ezisakazwayo ziletha kugridi yamandla nabasebenzisi, futhi ibona ukusebenzisana okunobungane negridi yamandla.
Isibalo esilandelayo sibonisa ukwakheka kwangaphakathi kwesakhiwo samandla amaningi wokugeleza kwamandla
Kamuva, kungukugcina umthombo wokugcina umthwalo. Uhlangothi lomthombo lubandakanya imishini ejwayelekile yokuhlinzekwa kwamandla, amayunithi we-CHP, ama-boilers kagesi neminye imishini, kanye nokunikezwa kukagesi kwegridi yangaphandle nokufinyelela kwamandla okuvuselelekayo; igridi ihlukaniswe ngamakhaza nokushisa nezinye izinhlelo zokuhambisa; uhlangothi lweDashi lungugesi, ukushisa nomthwalo obandayo ngaphakathi kwepaki Ngokuya kokugcinwa kwamandla, amasistimu egesi ahlukahlukene anemishini yawo yokugcina amandla. Ohlangothini olude, ugesi, igesi, ukushisa nomoya wamandla amaningi kubandelana. Izindlela ezingefani zamandla ahlukene zimelelwa ngemibala ehlukene, nemishini yokuguqula amandla amaningi (amaphampu okushisa, i-CHP, ama-boilers wegesi, amayunithi we-lithium bromide) imibhangqwana ehlukile yamandla. Izinhlobo ezahlukahlukene zamandla epaki zihlanganisiwe futhi zisebenza ngendlela yezitshalo zamandla ezinamandla. Esakhiweni sokuqinisekisa ukulethwa kukagesi okuthembekile, ukushisa nokupholisa imithwalo, ukusetshenziswa kwamandla kwamakhasino kuyabonakala, ukusebenza kahle kwamandla kuyathuthukiswa, nezindleko zamandla ziyancishiswa. Futhi ngamandla avuseleleka kakhulu, uhlelo lwamandla ahlanganisiwe lunokuguquguquka okwengeziwe, okuthuthukisa ukwamukelwa kwamandla avuselelekayo futhi kuthuthukise futhi ezomnotho kohlelo.
Icala lesicelo se-IEMS
Iphrojekthi ye- "Internet +" Smart Energy (Energy Internet) Demonstration eseChengdu Hi-tech West District. IChengdu West High-tech Zone iyipaki yezimboni elingamakhilomitha-skwele angama-40. Uhlelo lwe-IEMS luhlaziya ukulethwa nokufunwa kwamandla aphelele lapha ukuze kufezekiswe ukusebenza kahle kwamandla ngokusebenzisana. Ukugxila esidingweni samandla afana nogesi, igesi, ukupholisa kanye nokushisa, ukwakhiwa kwepaki yokuboniswa kwe-inthanethi esekwe endaweni ehlanzekile yamandla (ukubanda kwegesi yemvelo nokubanda kokushisa okuhlangene, ama-photovoltaics, amandla omoya, njll.) Kuzoba kwenziwa ukufeza igesi yemvelo namandla e-geothermal endaweni ephakeme entshonalanga yasentshonalanga, Umoya namandla elanga, umusi, amanzi abandayo, amanzi ashisayo, ugesi nokunye ukuphathwa kwamandla.
Uhlelo lokuphathwa kwamandla lukaGuang Conghua Industrial Park olubanzi lwe-R&D kanye nephrojekthi yokubukisa. Ingxenye eyinhloko yalesi siqiwi ingamakhilomitha-skwele ayi-12 futhi iyipaki yezimboni ejwayelekile. Amaphethini wamandla wepaki yezimboni abonakala ngamandla amakhulu, ukuhamba kwamandla amaningi, kanye nokungena okuphezulu. Inezimo ezinhle eziyisisekelo zokubambisana kwamandla amaningi nokusabalalisa okuningi kwamandla. Ilungele ukuboniswa kwe-“Internet +” i-smart energy energy energy integrated integrated system yebhizinisi. Indawo. Yakha uhlelo lwe-IEMS epaki, iphakamisa isizinda samandla amancane nemodi yokuphendula yomsebenzisi, isebenzise ubuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa kwezisetshenziswa okuguqukayo, futhi ekugcineni uhlelo luphawula ukufaka izicelo.
Iphrojekthi ye-R&D yohlelo lokulawula amandla e-smart energy e-Lisha Island, eDongguan, eGuangdong. IDongguan Lisha Island nayo iyipaki yezimboni engaba amakhilomitha skwele ayi-12. Uhlelo lwe-Lisha Island smart energy luhlukaniswe ngamazinga amane alandelayo: okokuqala, ukulawulwa kwamandla kwepaki ngaphansi kokuhlanganiswa kwe-thermoelectricity; Okwesibili, kuba nezinkinga lapho inqubomgomo inganikelwanga amandla okuphathwa kwamandla Kwemibandela epaki; Okwesithathu, ukuphathwa kwamandla kwesifunda okunenqubomgomo kukhululwe ngokuphelele; okwesine, ukusebenzisana (ukuthengiselana) phakathi kwekusasa nohlelo olukhulu lokwenza umphakeli wamandla ohlanganisiwe. Ucwaningo nentuthuko yohlelo lokulawulwa kwamandla ihlukaniswe izigaba ezine: okokuqala, okuphelele kuyabhekelelwa futhi kungaphatheki kahle ngokwengxenye; Okwesibili, okuphelele kuyathengiseka futhi kulungiselelwe kancane; Okwesithathu, ukwenziwa kwayo konke kanye nengxenye yokuxhumana; Okwesine, ukusebenzisana okuphelele kanye nokwenza kahle okuhlangene.
Isifundazwe saseJilin sinamandla amaningi okuphathwa kokuphathwa kwamandla kwamandla nokwenza umsebenzi wokucwaninga ngokulawula ukwenziwa kahle. Ingxenye yamayunithi ophethiloli esiFundazweni saseJilin makhulu, futhi akukho okutholakalayo okugcinwa khona njengamandla okupompa nophethiloli. UJilin utholakala endaweni ebandayo. Isikhathi sokushisa ebusika sifinyelela kwengxenye yonyaka. Ngaphezu kwama-90% wamayunithi wegesi eshisayo angamayunithi okushisa Ngesikhathi sokushisa, ukukhishwa okuncane kwamandla okushisa kudlula umthwalo omncane wesifundazwe, ingcindezi enkulu yokufaka amandla omoya, nenkinga yokulahlwa komoya yimbi kakhulu. Isizathu esiyinhloko ukuthi ubudlelwano bokulawulwa kukagesi wokushisa weyunithi yokushisa kanye nemodi “yokulungisa ugesi ngokushisa” inciphisa kakhulu umthamo wayo wokushelela futhi uthathe isikhala samandla omoya. Ukuthi isetshenziswe kanjani imakethe ukukhuthaza ukulawula nokuhweba kokuhamba kwamandla amaningi kuyinkinga enkulu kunazo zonke. Ngalesi sizathu, uhlelo lwe-IEMS lwalusetshenziselwa ukutadisha inqubo yokuhweba emakethe yohlelo oluhlanganisiwe lwamandla amaningi, ukutadisha ukusetshenziswa kwezindleko kwabadlali abaningi bezimakethe, futhi nokutadisha Ngaphezu kwalokho, enye impendulo ephendula amandla endaweni yokubukisa yenzelwe , kanye nobuchwepheshe bokuhlanganisa amandla we-opharetha wokuhlanganisa amandla amaningi kuhlangene ukuxazulula inkinga yokusetshenziswa kwamandla komoya okukhulu ngenkathi kufinyelelwa ukufudumeza okuhlanzekile.
Ekuqhubekeni kwe-inthanethi yamandla kusuka ku "mqondo" kuya ku- "kokwehla", kusenemibono eminingi emisha, ubuchwepheshe obusha, izinhlelo zokusebenza ezintsha, ezizodingidwa futhi zabelwane nawe ngokuzayo, ngethemba lokusiza umsebenzi wonke umuntu nokufunda.
Ibhethri Lithium Lamandla, I-Power Lithium Battery Pack, Iphakethe lebhethri lamandla, Amaseli ebhethri weLithium Ion, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion, I-20ah Lithium Ion Ibhethri,